Bisadda Buluuga ah ee Ruushka | Bisadaha Noti
El bisad buluug ruush ah waa, oo ay weheliso reer Faaris, tartan aad u sharaf badan. Aniguna kaliya uma jeedinayo deganaanteeda iyo dabeecaddeeda daacadnimada, laakiin sidoo kale waxaan u jeedaa socodkeeda iyo jidhkeeda caato. Muuqaalka uu ninkan dhogorta leh leeyahay waa mid xasaasi ah, laakiin isla markaa, karti u leh dejinta kuwa u baahan.
Isbarasho iyo kalgacal, bisadda buluugga ah ee buluugga ah waxay jeceshahay in la salaaxo oo, wixii ka sarreeya, in wax la baro. Ma rabtaa inaad macallin u noqoto?
1 Asalka iyo taariikhda bisadda buluuga ah ee Ruushka
2 Sifooyinka jirka ee bisadda buluuga ah ee Ruushka
3 Mudo intee le'eg ayay bisad buluug ah oo Ruush ah nooshahay?
4 Dabeecad bisad buluug ah oo Ruush ah
5 Daryeelka bisadaha buluuga ah ee Ruushka
6 Caafimaadka bisadda buluugga ah ee Ruushka
7 Bisadda buluugga ah ee buluugga ahi ma waxay keentaa xasaasiyad?
8 Waa imisa qiimaha bisad buluug ah oo Ruush ah?
9 Sawirada bisadaha buluuga ah ee Ruushka
Asalka iyo taariikhda bisadda buluuga ah ee Ruushka
In kasta oo aan wali si dhab ah loo aqoon halka ay ka soo jeedo, qarnigii XNUMX-aad, Arkhangelsk (Russia) dhawr nuqul ayaa la iibsaday loona qaaday England. Wixii intaa ka dambeeyay dad aad u badan ayaa xiisaynayay iyaga, iyo 1880kii, ayaa la soo bandhigay markii ugu horeysay.
Si kastaba ha noqotee, 40-yadii noocyadu waxay halis ugu jireen dabargo'a Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Si looga fogaado wixii shaki la’aan musiibo noqon lahaa, waxay dhexgaleen bisadaha Siamese. Dhowr sano kadib, sanadkii 1970, waxaa suurtagal noqotay in markale la shaqeeyo si dib loogu soo celiyo buluuggii Ruushka ahaa ee Buluuga ahaa, iyo sanadkii 1984 si rasmi ah ayaa loo aqoonsan karaa tartan ahaan.
Sifooyinka jirka ee bisadda buluuga ah ee Ruushka
Bisadda Buluugga ah ee Ruushku waa bisad dhexdhexaad ama ballaadhan leh, miisaankeeduna yahay 3,5kg dheddigga, iyo 7kg ragga. Madaxa waa yar yahay, oo leh qalfoof fidsan, iyo indho yicib-cagaar ah, oo si ballaaran loo kala soocay laakiin aan gaarin dhamaadka.
Waxay leedahay jir dherer ah, adag, leh lugaha dhaadheer, kuna daboolan dhogor gaaban, cufan, buluug-cawl ah. Qaarkood sidoo kale waxaa laga yaabaa inay leeyihiin milicsiga lacagta, taas oo ah waxa loo yaqaan tapping lacag, laakiin waa la aqbalsan yahay in bisadu leedahay buluug isku mid ah.
Mudo intee le'eg ayay bisad buluug ah oo Ruush ah nooshahay?
Cimriga bisadda buluuga ah ee Ruushka waa 15 sanado 20, sidaa darteed waxay la mid tahay tan jinsiyadaha kale sida Yurubta caamka ah. Shaki la'aan tani waa war wanaagsan, maadaama ku dhowaad labaatan sano waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato quruxda iyo macaanka xayawaankan.
Dabeecad bisad buluug ah oo Ruush ah
Bisadda buluuga ah ee Ruushka waa mid deggan, laakiin waliba kalsooni daro dadkaas iyo xoolahaas aydaan aqoon. Waad la jaan qaadi kartaa iyaga ilaa inta ay si tartiib ah kuula dhaqmayaan, deg deg iyo xiisad la'aan; haddii kale, foorida, cabaada, iyo wixii la mid ah ayaa aad u badan.
Sababahan awgood, kani waa bisad sida ugu fiican ugu noolaan doonta qoysaska - ama ha dhaleen ama ha dhasheen - oo aamusnaan ah, oo jecel inay waqti la qaataan saaxiibadood afarta lugood leh (tusaale ahaan, iyagoo daawanaya telefishanka ama akhrinaya buug), laakiin adiga oo aan kugu badin. Iyo haddii aad qorsheyneyso inaad qoyska ka dhigto mid kora, qaarna tilmaamaha bulshada waxaad bisadahaaga ka heli kartaa inuu saaxiib la noqdo xubinta cusub si dhakhso leh.
Daryeelka bisadaha buluuga ah ee Ruushka
Bisadda buluugga ah ee Ruushka waxay u baahan tahay biyo nadiif ah oo nadiif ah, cunto tayo leh iyo cadayasho maalinle ah. Laakiin marka lagu daro seddexdan daryeel ee aasaasiga ah, waa lagama maarmaan in la geeyo dhakhtarka xoolaha, sida eey oo dhan si loo helo dhammaan tallaalada, iyo mar qaangaarka ah si loo hubiyo caafimaadkiisa.
Arrin kale oo muhiim ah oo aynaan ilaabi karin ayaa ah tan juego. In kasta oo aad tahay bisad deggan, ha u oggolaan inay caajiso. Xayawaan caajis ahi waa xayawaan aan waqti badan ku qaadan doonin inuu sameeyo waxyaabo aysan ahayn inuu sameeyo, sida xoqida alaabta guriga ama qaniinyada.
Bakhaarada xayawaanka waxaad ka heli doontaa alaab-tooyada aan la tirin karin, sida tilmaamayaasha laysarka, kubadaha, xayawaannada cufan, xargaha, ciyaaraha is-dhexgalka ... ku qaado dhowr kalfadhi oo gaagaaban maalintii oo aad la baashaalayso dhadhankaaga. Xitaa waad bari kartaa isaga amarrada, sida fadhiga ama haraatida.
Caafimaadka bisadda buluugga ah ee Ruushka
Bisadda buluuga ah ee Ruushku waxay ku faani kartaa inay tahay mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee caafimaadkoodu aad u wanaagsan yahay. Tani waxay sabab u tahay, qayb ahaan, xaqiiqda ah in bini-aadamku si dhib yar hidde ahaan wax uga beddelay. Laakiin iska jir, tani macnaheedu maahan inaadan ku xanuunsan karin meel ka fog. Waa noole, oo sida qof kasta oo kaleba wuu ku xanuunsan karaa, ama shil ku dhici karaa.
si Marka ugu horeysa ee aad dareento ama aad aragto inuusan fiicneyn, waa inaad u geysaa dhakhtarka xoolaha. Cudurrada ugu badan ee ku dhaca xubnaha jirka waa hargab, otitis, conjunctivitis, iyo dhibaatooyinka caloosha iyo mindhicirka. Haddii aad sidoo kale hesho tallaalada lagama maarmaanka ah, waxaa lagaa ilaalin karaa si heer sare ah fayrasyada sababa cudurrada kale ee halista ah, sida difaaca jirka oo aan fiicnayn ama kansarka dhiigga.
Bisadda buluugga ah ee buluugga ahi ma waxay keentaa xasaasiyad?
Xasaasiyadda bisadu waa dhibaato aad u daran oo ku dhacda kuwa caabuda xayawaankan. Laakiin waad nasan kartaa, maadaama buluuga Ruushka uu leeyahay jaakad ka kooban laba lakab oo aad isugu dhow isla markaana, marka lagu daro, cufan, sidaas xaddiga timaha ay lumiso ay aad uga yar tahay tan ay lumeen noocyada kale.
Laakiin haddii tani ay kuugu muuqato wax yar, waa inaad taas ogaataa waxay soo saartaa glyprotein yar Fel D1, taas oo ah waxa kiciya astaamaha xasaasiyadda. Tani waxay ka dhigeysaa in loo tixgeliyo bisad hypoallergenic.
Waa imisa qiimaha bisad buluug ah oo Ruush ah?
Ma dooneysaa inaad iibsato bisad buluug ah oo Ruush ah oo aad rabto inaad ogaato inta ay kugu kacayso? Hadday sidaas tahay, waa inaad ogaataa in haddii aad ku iibsanaysid meel ugaadh ka soo gasho qiimaha ayaa ku saabsan 700 euros. Haddii, dhinaca kale, aad doorbideyso inaad ku hesho dukaanka xayawaanka, qiimahaas wuu ka hooseeyaa, qiyaastii 500 euro.
Sawirada bisadaha buluuga ah ee Ruushka
Bisadda buluugga ah ee buluugga ahi waa xayawaan soo jiidasho leh, sidaa darteed ma dhammayn karno maqaalka iyada oo aan marka hore lagu siinaynin sawir sawir leh midkan dhogorta leh. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay iyaga:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadda Buluugga ah ee Ruushka
Xarunta ilkaha dijo
Waxaan qaatay bisad la mid ah tan sawirka labaad. Aad u firfircoon oo qosol badan, wuxuu dhowaan soo bandhigay dhibaatooyin dulin ah sababo la xiriira xaaladdiisii ​​hore ee waddada. Kahor ma jecli bisadaha, laakiin aniga oo leh Leoncio aad ayaan u dareemayaa farxad. Wax badan ayaan ka baran doonaa barta.
Ku jawaab xarunta ilkaha
Waxaan haystaa bisad qurux badan oo aanan garanayn waxay ahayd ilaa shalay oo qof soo ag maray oo igu yidhi buluug buluug ah, magaceeduna yahay sagaal hadana waxaan fahmay sababta markii aan la baxnay xaaskayga ay u ooyaysay habeenki ka hor intaanan dibadda u bixin oo aan ku faraxsanahay waxaan jeclahay iyada xayawaan aad u qurux badan oo dhammaan kittens laakiin gaar ahaan aniga ninel
HADIYAD 2 Bisadaha Bluugga Ruushka
Waxay leeyihiin dabeecad aad u wanaagsan oo aad u jecel. Waa rag iyo dumar. Waa la tallaalaa, waa la qalalay, waa la sifeeyey, qashin bayna leeyihiin.
Aad bay aqoon wanaagsan u leeyihiin. Weligoodba waxay igula noolaayeen guri qoys tan iyo markii ay dhasheen 4 sano kahor. Markaa iyagu waa kuwo aad u soo jeeda oo qaan-gaar ah oo aan laga baran in ay ku sameeyaan "waxyaalaha yaryar" sanduuqooda ciidda. Weligood cidna ma qaniinin mana xoqin sababtoo ah waxay kaliya kala kulmeen macaan hareerahooda.
Runtii way ku raaxaystaan ​​daawashadaada, ku raacaadaada, iyo inay wax ka nadiifiyaan lugahaaga agtooda si aad u salaaxdo.
Waan u hibeeyay iyaga maxaa yeelay laba sano ka hor waxaan lahaa xasaasiyad. In kasta oo aan isku dayey inaan ka adkaado, haddana wey ka sii badan tahay. Mar dambana ma siin karo iyaga dareenka iyo kalgacalka ay mudan yihiin.
Waxaan raadinayaa guri labadeenaba. Waa walaalo, waligoodba way wada joogeen waana sida ay rabaan inay ahaadaan. Si la yaab leh ayey u wada socdaan. Laba bisadoodna waa iskudhafka ugufiican ee midba midka kale lajoogo marka aadan guriga joogin iyo inaad labalaabto koolkoolinta markaad guriga gaarto.
Dad culus oo masuul ah oo raba inay wax siiyaan oo ay helaan jacayl badan.
Kittens ayaa diyaar u ah inay ku keenaan Barcelona.
Sawirada kuwa loo malaynayo bisadaha buluuga ah ee ruushka ah ee leh indhaha liinta ayaan ka soo jeedin noocaas, waa bisado chartreux ah, oo ah nooc kala duwan indhahooduna waa oranji.
Sida loo ogaado inta ay bisad yeelan doonto
Maxay cuntaa bisadda uurka leh